38 Jehova wee si n’oké ifufe+ zaa Job, sị: 2 “Ònye bụ onye a nke na-ekpuchi ihe e zubeworoSite n’ikwu okwu amamihe na-adịghị na ya?+ 3 Biko, kee ájị̀ n’ume dị ka dimkpa,Ka m jụọ gị ajụjụ, gị onwe gị azaakwa m.+ 4 Olee ebe ị nọ mgbe m tọrọ ntọala ụwa?+Gwa m, ma ọ bụrụ na i nwere nghọta. 5 Ònye kpebiri otú ọ ga-aha, ma ọ bụrụ na ị maara,Ka ọ̀ bụ onye setịrị eriri e ji atụ̀ ihe n’elu ya? 6 N’ime gịnị ka e gwunyere ntọala+ ya,Ka ọ̀ bụ onye tọgbọrọ nkume isi nkuku ya, 7 Mgbe kpakpando ụtụtụ+ tikọrọ mkpu ọṅụ ọnụ,Ụmụ Chineke+ niile amalitekwa iti mkpu otuto? 8 Ọ̀ bụkwa onye ji ibo ụzọ gbochie oké osimiri,+Bụ́ nke malitere ịsọpụta dị ka à ga-asị na o si n’akpa nwa pụta n’ike; 9 Mgbe m yiwere ya ígwé ojii dị ka uwe,Waakwa ya oké ọchịchịrị dị ka ákwà, 10 M wee kpaara ya ókè,Tinyekwa ihe ntụchi na ibo ụzọ,+ 11 M wee sị: ‘Ebe a ka ị ga-erute, ị gaghịkwa agabiga ya;+Ebe a kwa ka ebili mmiri gị nke dị nganga ga-ejedebe’?+ 12 Ọ̀ bụ malite n’ụbọchị gị ka i nyere ụtụtụ iwu?+Ọ̀ bụ gị mere ka chi ọbụbọ mara ọnọdụ ya, 13 Ka o wee bọọ n’ebe niile ụwa sọtụrụ,Ka e wee yọgharịa ụwa, ndị ajọ omume ewee si n’ime ya dapụsịa?+ 14 Ọ na-agbanwe onwe ya dị ka ụrọ+ nke a kara akara,Ihe niile adịrịzie ka hà yi ákwà. 15 A na-egbochi ìhè inwuru ndị ajọ omume,+A na-agbajikwa ogwe aka dị elu.+ 16 Ị̀ gatụla n’ebe oké osimiri si asọpụta,Ka ì jegharịtụla+ chọọ ogbu mmiri?+ 17 È kpugheworo gị ọnụ ụzọ ọnwụ,+Ka ị̀ pụrụ ịhụ ọnụ ụzọ oké ọchịchịrị?+ 18 Ì jirila amamihe chebara ebe ndị sara mbara n’ụwa+ echiche?Gwa m, ma ọ bụrụ na ị maara ihe a niile. 19 Olee ụzọ e si aga n’ebe ìhè bi?+Oleekwa ebe bụ́ ụlọ ọchịchịrị, 20 Nke na ị ga-akpọrọ ya gaa n’ókè ya,Nke na ị ga-aghọtakwa okporo ụzọ e si aga n’ụlọ ya? 21 Ị̀ maara ya n’ihi na a mụọla gị mgbe ahụ,+Nakwa n’ihi na ụbọchị ndụ gị dị ọtụtụ? 22 Ị̀ banyetụla n’ụlọ a kwakọbara snoo,+Ka ị̀ na-ahụ ọbụna ụlọ a kwakọbara akụ́ mmiri ígwé,+ 23 Bụ́ nke m debere maka oge ahụhụ,Maka ụbọchị ịlụ ọgụ na ibu agha?+ 24 Olee ụzọ ìhè si ekesa onwe ya,Oleekwa ụzọ ifufe ebe ọwụwa anyanwụ+ si ekusasị n’elu ụwa? 25 Ònye waara idei mmiri ụzọ,Waakwara oké mmiri ozuzo na égbè eluigwe ụzọ,+ 26 Ime ka mmiri zoo n’ala mmadụ na-ebighị,+N’ala ịkpa mmadụ na-ebighị, 27 Iji mee ka afọ ju ebe oké mmiri ozuzo mebisịrị nakwa ebe tọgbọrọ n’efu,Meekwa ka ahịhịa pulite n’ala?+ 28 Mmiri ozuzo ò nwere nna,+Ka ọ̀ bụ onye mụrụ igirigi?+ 29 N’afọ ònye ka mkpụrụ mmiri si apụta,Ònyekwa na-amụpụta mkpụrụ mmiri+ ígwé? 30 Mmiri na-ezo onwe ya dị ka è ji nkume zochie ya,Elu ogbu mmiri na-akpụkọtakwa akpụkọta.+ 31 Ị̀ pụrụ ikesi ihe kekọtara ìgwè kpakpando Kaịma ike,Ka ị̀ pụrụ ịtọghe ụdọ kekọtara ìgwè kpakpando Kisịl?+ 32 Ị̀ pụrụ ime ka ìgwè kpakpando Mazarọt pụta n’oge ya?Ị̀ pụrụ iduzi ìgwè kpakpando Ash na ụmụ ya? 33 Ị̀ marawo ụkpụrụ na-achị eluigwe,+Ka ị̀ pụrụ ime ka ike ya dị irè n’ụwa? 34 Ị̀ pụrụ iji olu dara ụda gwa ígwé ojii okwu,Ka oké mmiri ozuzo wee zuo gị ahụ́?+ 35 Ị̀ pụrụ izipụ àmụ̀mà ka ha gawaWee sị gị, ‘Lee anyị!’? 36 Ònye tinyere amamihe+ n’ígwé ojii,Ka ọ̀ bụ onye mere ka ihe ndị na-eme na mbara igwe nwee nghọta?+ 37 Ònye pụrụ iji amamihe ya kwuo ole ígwé ojii dị kpọmkwem,Ma ọ bụ ite mmiri nke eluigwe—ònye pụrụ ikpu ha ihu,+ 38 Mgbe uzuzu na-awụpụ dị ka ihe gbazere agbaze,Ájá ụrọ ana-anyakọtakwa ọnụ? 39 Ị̀ pụrụ igbutere ọdụm anụ ọ ga-eri,Ị̀ pụkwara ime ka afọ ju ụmụ ọdụm agụụ ji,+ 40 Mgbe ha makpu n’ebe zoro ezo,+Ma ọ bụ, mgbe ha makpu n’ọgba ha na-eche anụ? 41 Ònye na-akwadebere ugoloọma nri ya+Mgbe ụmụ ya na-etiku Chineke maka enyemaka,Mgbe ha na-awagharị n’ihi na ihe ha ga-eri adịghị?